Salvio Berlusconi Oo Mehersaday Gabar 18 sani jir ah. Daawo Sawirada - iftineducation.com
iftineducation.com – Raísul wasaarrihii hore ee Berlusconi oo ka hadlayay Barnaamij aad loo jacelyahay dad badan ay ku taxan yihiin kana baxo Tv ,isaga uu leeyahay ayuu ku sheegay in uu mahersaday gabdha lagu magacaabo Francesca Pascale oo muda wada socdayn.
Salvio Berlusconi oo Gabdha uu sheegay in uu mahersaday aad ayay uga yar tahay marka la fiiriyo farqiga xaga da’da ah gabdha waxay jirta 27 sano isna waxuu jira 76 sano waana farqi weyn oo ay dadka la yabayn marka la isku arkay gabdha iyo Salvio Berlusconi.
Raísul wasaarihii hore Talyaaniga Berlusconi ayaa horay u soo guursaday waxuuna leeyahay shan caruur ah gabadhiisa ugu weyn waxaa lagu magacaaba Marina.
Sidoo kale Berlusconi ayaa amaan kala dul dhacay gabadha uu guursaday ee lagu magacaabo Francesca Pascale isaga oo yiri Gacalisadayda jirta 27 ah aad ayay u qiimo badantahay ugana qurux badantahay gabdhaha hadda ku nool calamka aadna waa u jeclahay iyadane way ii jaceshay.
Raísul wasaarihii ee Talyaaniga ayaa horay lagu eedayay in gabdha yar yar uu la bashaalay isaga oo waliba lagu qaday dacwad ka dhan ah in gabdhaha yar yar uu ku soo jiito lacago.